[कथा] राममाया – शीतल गिरी | आजको खबर, आजै अनि ताजै... Popular News Portal from Nepal, Today's News, Political News, Sports, Economics, Business, Education, Tourism, Literature, Entertainment, Music, Video, Cinema, Movies, आजको खबर, आजै अनि ताजै... Popular News Portal from Nepal, Today's News, Political News, Sports, Economics, Business, Education, Tourism, Literature, Entertainment, Music, Video, Cinema, Movies,
२०७४ चैत्र ५, सोमबार , नेपाली समय : ०८:०१ pm | आजको खबर, संचालक : रेनुका बराल/९८४१७१६४६५ सूचना विभाग दर्ता नं. ७४/०७३-७४, सम्पादक- डिल्लीरमण सुवेदी/९८५१२७७७२१
राममायाको बाल्यकाल टालाटुलीको पुतली बनाएर बिहे गराई खेल्ने उमेरमा गिट्टी कुटेर बित्यो । बागमती किनार गोपालकुटीको छाप्रे बस्तीमा उनले आँखा खोलेकी थिइन् । अभाववश जोगी खोलाको पानी जमेको खोल्सा, पोथ्रा–पोथ्री, आड भएको ठाउँमा जवान हुँदा पनि निर्वस्त्र नुहाउनु पर्दथ्यो । उनको बाउ ढुङ्गा, बालुवा लोड गर्ने मजदूर थियो । ढुङ्गा, बालुवाको ठेकेदार शंकर नित्यकर्म गर्न जंगल जाने गथ्र्यो— त्यहाँ उसले राममाया निर्वस्त्र नुहाएको धेरै दिनदेखि लुकेर हेर्ने गरेको थियो ।
एकदिन यौवनले मदमस्त भएपनि बाध्यतावश निर्वस्त्र नुहाउँदै गरेकी राममायाले झाडीको ओटमा लुकेर नेत्रले यौवन रसपान गर्दै गरेको शंकरलाई देखिन् । राममायाको मदमस्त अक्षत यौवन पहिलो पटक अवलोकन गरेकै दिनदेखि शंकरमा उन्माद छाएको थियो । राममायाको सम्झना आउने बित्तिकै उसको धडकन बढ्ने गथ्र्यो र आँखामा गठिलो, कसिलो कोमल यौवन नाच्दथ्यो । राममायाले उसलाई आफूतिर घुरेर हेर्दैगरेको देखिन् । जति समयमा उनले आफ्नो नग्न यौवन वस्त्रले ढाक्दथिन्, उसको आँखाले नग्न यौवन र अक्षत योनीको पुष्ट डिल देखिसकेको थियो ।
बस, यही एउटा सम्बन्ध दुबैकोबीच बन्न गयो । नाङ्गो शरीर पराईले हेर्नु राममायाको धर्मभीरु मनमा डर पस्यो । उनलाई जुन किसिमको शिक्षा उसका अशिक्षित आमा र हिन्दू धर्मले दिएको थियो, त्यसले शंकरलाई उनले आफ्नो जीवनबाट पन्छाउन सकिरहेकी थिइनन्, लाग्दथ्यो उनको जीवनको उ एक अंग हो । नाङ्गो शरीरलाई हातले छुनु, भोग्नु अथवा नजरले पिउनु एउटै थियो, उनको लागि । त्यसपछि जब पनि शंकर बाटोमा भेटिन्थ्यो, राममायाको मुहार रातो बन्दथ्यो, नजर झुक्दथ्यो र मुटु जोड–जोडले धड्कन थाल्दथ्यो । पहिले त शंकरले खासै ध्यान दिएको थिएन । चुरे छेउछाउका महिलाहरू खोला–खोल्ािमा निर्वस्त्र नुहाउनु र शरीरको गोपनीय भाग देखिनु कुनै खास कुरै हैन ।
यस्तो हुने गरेको थियो पहिले पनि र शंकरले धेरैको देखेको हुँदा वास्ता गर्ने गरेको थिएन । तर राममायाले महशुस गरेको अपराध बोधले उसलाई चुम्बकले जस्तै उनीतिर तान्यो । विचरी राममायालाई थाहा थिएनकी स्वयम् विपत्तिको भूमरीमा फस्दै छिन् भन्ने । उनी त यो सोचेर मरिचजस्तै चाम्रिएकी थिइन् कि उनीबाट धेरै ठुलो अपराध हुनगएको छ । उनले लुगा लगाएर नुहाउनु पथ्र्यो ।
राममाया शंकरको सम्मुख पर्दा यस्तो लाग्दथ्यो, मानौं अपराध उनको शरीरको छ, नाङ्गो भएर । उनी शंकरको सम्मुखबाट आफ्नो अपराधी शरीरलाई हटाउन चाहन्थिन् । कुनै संवेदनशील समझदार युवक हुन्थ्यो भने राममायाको यस्तो भावनाले उसको हृदयको कोमल तार झंकृत पर्ने थियो, राममायालाई सम्मान गर्ने थियो ।
यस अबोध र नैतिक चेतनाबाट अभिभूत युवतीप्रति प्रेमले छताछुल्ल भै पोखिने थियो, जो यति सानो कुरोमा अपराध बोधको भारले दबिएकी छ । तर शंकर अनेकौं वैध अवैध कमाईले भरखरै धनि बनेको प्रौढ ठेकेदार थियो । घरमा २ छोरी र १ छोरा भएको रसिक थियो । जो गुण्डागर्दी त गर्दैनथ्यो तर प्रत्येक वाक्यमा अश्लील अर्थ खोज्ने घटिया बुद्धि राख्दथ्यो । राममायाको लाजलाई उसले एउटा समर्पण ठान्यो र हर उपायले जस्तोसुकै चाल चलेर, मूल्य चुकाएर भोग्न तयार भयो ।
यसै अवस्थामा एकदिन उसलाई पक्का विश्वास भयो कि प्रयत्न रामामायाले गर्दैछ, काम सम्बन्ध राख्न चाहन्छ भन्ने धारणा मनमा बनायो । अनि उसले प्रत्येक दिन नाना किसिमबाट राममायालाई यो अनुभूति गराउने प्रयत्न गर्न थाल्यो, मानौ उ उनको सच्चा प्रेमी हो र उनको लागि छटपटाई रहेछ । राममाया दश कक्षामा पढ्दथिन् ।
एक बिहान स्कूल जाँदा बागमती पूलपारी शंकरले एउटा चिठ्ठी जबरजस्ती उनको हातमा राखी दियो । राममायाको मनमा जुन पहिलेदेखि सर्वाङ्ग देखेको भन्ने अपराध बोध थियो, त्यसमा झन् चिठ्ठी दिँदा हात समातेको अपराध बोध थपियो । यो अपराध बोध विषालु लहराजस्तै उनको शरीरमा फैलियो र यसले केही दिनमै एउटा विकृत आत्मीयताको रुप लिनपुग्यो । एउटा विकृत आत्मीयता राममायाको शंकरसँग बस्यो । उसको अशोभनीय हावभावमा उनलाई घृणा लाग्दथ्यो र साथै एउटा रहस्यमय आकर्षण पनि शंकरप्रति महशुस हुन्थ्यो ।
उ राममायाको जीवनको पहिलो पुरुष थियो, सायद यसैकारण आफ्नो विकृत हावभाव हुँदा हुँदै पनि राममायाको विशाल अस्तित्वमा असारको बादल बनेर छाउन सक्यो । विस्तारै विस्तारै जसरी जसरी यो बिषालु लहरा फैलियो, अपराध बोधको भावना हराउँदै गयो र त्यसको ठाउँ एउटा वास्तविक, मासूम, पवित्र प्यारले लियो । प्रायः गरेर शंकरले उनलाई आफ्नो वाइकमा राखेर स्कूलदेखि घरको नजिक पुगाइदिन्थ्यो । तर कहिल्यै जवरजस्ती गरेन ।
शंकरको कुरोको अश्लिलता राममायालाई पक्कै बिझ्दथ्यो । उसले सामान्य कुरा पनि गथ्र्यो भने अथवा उसलाई घुथ्र्यो भने तब पनि उसलाई अश्लिलताको करेन्ट जस्तो लाग्दथ्यो, तर अब उनले यस अनुभूतिलाई आफ्नो मनको अपराध ठानेर धुजा–धुजा परिदिन्थिन् । शंकरले जब पहिलो पटक उनलाई भ्यालेन्टाइन डेमा टुपिस सेट दियो त तब फेरी एक पटक राममायाको मुख रातो भयो र प्याकेट लिँदा उनलाई ग्लानी र पतनको अनुभूति नभएको होइन ।
तर कुनै कारण थिएन, चलन थियो, सबै मानिस भ्यालेन्टाइन डेमा उपहार दिन्छन्÷लिन्छन् । टेलिभिजनमा हेरिकन, पत्रिकामा पढिकन यी कुराहरू उनका पिँढीका लागि सभ्यता बनिसकेको छ, संस्कार बन्दैछ । एकदिन शंकरले सिनेमा हेर्ने प्रस्ताव राख्यो, स्कूलको समयमा 'हरिऔनमा गइ सिनेमा हेरौं' सिनेमा हेरेको बारे कसैलाई पनि थाहा भएन । फर्कदा उनीहरूले नयाँ रोडमा चिया नास्ता गरे ।
शंकरले उनको हातमा आफ्नो हात राख्यो र भन्यो, 'हेर राममाया, मेरो माया राजेश हमालको भन्दा कम छैन । जसरी उ सारा संसारसँग लड्यो, त्यसै गरी मैले पनि श्रीमती र छोरा छोरीलाई छाडिदिन्छु ।' कुरा सुन्दा धेरै राम्रो लागेको थियो । उनको हृदयमा पनि उमङ्ग थियो र उनी पनि वास्तविक किशोर हृदयको त्यस निर्मल भावनाबाट प्रेरित थिइन्, जसले सगरमाथा जस्तो उँचो सामाजिक पर्खाललाई कुहिएको बस्तु ठान्दछ, जुन वास्तविक प्रेमको आगोको अगाडिी अन्ततः पग्लिन्छ नै । 'यदि तिमीले आफ्नी स्वास्नी र छोरा–छोरीलाई छाड्न सकेनौं भने ?' उनले लजाएको स्वरमा नजर झुकाएर भनिन् ।
'अरे किन छाड्दिन ।'
'तिमी बिहा गरेको पत्नी र आफ्नै छोरा–छोरीलाई छोड्छौं...? भोली मलाई छाड्न के बेर, म तिमीसँग कुरा गर्दिन' उनी उठ्न खोजिन् ।
'अरे, नरिसाउ, तिमी मान्छौं भने तिनीहरू घरमै बसुन्, तिमी मसँग बस्नु । तिमी नरिसाउन । अरे राम्री प्रेमिकाको लागि त म आफ्नो घाटी पनि कटाउन तयार छु ।'
राममाया हाँस्न थालिन् । उनलाई शंकरको कुरा गराई राम्रो लाग्थ्यो । उनलाई ऊ सीधासादा तर पत्नी र घर–परिवारबाट माया नपाएको जस्तो लाग्थ्यो । तर उ स्वयं भने मायाको खानी भएको, जति बाँडे पनि कमी नहुने झैं लागेको थियो । एकदिन शंकरले उनलाई एकदम कल्पना नै नगरेको कुरा भन्यो, 'राममाया एकान्तमा बस्न मन लाग्यो । चुरेको रमचुहाँ डाँडामा दिन भरी बसौं हुन्न र !'
'नाई, म जान्न ।'
'वाह ! के कुरा गरेकी । माया गर्छौं भने त मायालुले भनेको ठाउँमा त जानु पर्छ नी ।'
'तर म कसरी जान सक्छु ? आमालाई के भन्ने ?'
'हेर, त्यसको व्यवस्था म मिलाउछु । तिमी कहिले काही छुट्टिको दिन बाख्रा चराउन साथीहरूसँग जंगल जाने गरेकी छौं, अब यो नसोध्नु की मलाई कसरी थाहा भयो... साथीहरूलाई छक्याएर डाँडामाथि आउनु । कसैले सोधे भनिदिनु बाख्रा हराएर खोज्न जाँदा बाटो बिर्सेँ ।'
'नाई., म झूठो बोल्न सक्दिन ।' यति भनेर राममाया फरक्क फर्केर हेर्दै नहेरी गइन् ।
तुरुपले काम लागेन । शंकर त माझिएको खेलाडी न हो, चाल चल्न माहिर । उसले १०÷१५ दिनसम्म राममायासँग भेट गर्दै गरेन । नकाटेको चुस्स दारी बढाएको शंकर एकदिन विद्यालयबाट आउँदै गरेकी राममाया सामु देखापर्यो । पुतली बजारबाट केही किनेर डेरा जादैथ्यो । राममायालाई देख्ने बितिकै अर्को तिर हेर्न थाल्यो ।
उसको रौनकहीन उदास मुहार, झुस्स परेको दारी देखेर राममायाको हृदयमा चस्स घोच्यो । उनले उसलाई बोलाएर भनिन्, 'यो कस्तो रुप बनाएको तिमीले ?'
'केही दिन पर्ख त्यसपछि सुन्नेछौं... न त खान नै मन लाग्छ, न त पिउन नै' उसले झोलाबाट औषधिका सीसीहरू झिकेर देखायो, 'अब त यही मात्र मेरो साथी बनेको छ... औषधि खादैछु, मनको पीर भगाउँन, जेनतेन सास चलेकै छ । धिक्कार छ मेरो जीवनलाई । मलाई के थाहा थियो र तिमी मलाईबचि बाटोमा यसरी अलपत्र पारेर जानेछौं भन्ने ।'
'मैले तिमीलाई छाडेकी छैन !' राममायाले भनिन् ।
'त्यसो भए तिमीले किन मानिनौ मैले भनेको ठाउँमा जानलाई ? जब प्रेमको बाटोमा हिडेका छौं भने त साथ–साथै पाइला नचालेर किन पछाडि फर्किएकी ? भन, मदनसँग के मुनाले भेट गर्दैन थी ? मालती मंगलेलाई भेट्न जादैन थिन् र ? कुनै त्यस्तो प्रेमिका देखाइ देउ जो आफ्नो प्रेमीसँग भेट्न जादैनथी ।'
'नाई, म आउन सक्दिन । म धोखा दिन सक्दिन आमाबुवालाई !' राममायाले दृढता साथ भनिन् ।
'अनि मलाई दिन सक्छौं, माया गर्ने प्रेमीलाई ?' ओठ लेब्राउँदै शंकरले भन्यो ।
'अहँ, तिमीलाई पनि दिन सक्दिन । तिमी त मेरो जिन्दगी हौं', राममायाको आँखाबाट मोतीका दानाजस्ता मासुम दुई थोपा आँशु चुह्यो । यो देखेर एकछिनको लागि बेइमानी नै बेइमानीले भरिएको शंकरलाई पनि आफ्नो नाटकमा ग्लानी भयो, तर वासनाको आगो ग्लानीभन्दा प्रवल थियो । जुन मदमस्त नग्न शरीर उसले देखेको थियो, त्यो यौवन होइन, एउटा अनियन्त्रित यौवनोन्माद थियो । त्यो शरीरलाई भोग्न उसको रन्केको जीउ तड्पी रहेथ्यो ।
'त्यसो भए तिमीलाई यतिमात्र भरोसा छ आफ्नो प्रेमीप्रति ? त्यसोभए तिमीले मलाई जीवनभर साथ कसरी देउली ?'
'घरमा आएर मेरो बुवासँग कुरा गर । म तिम्रो हुँ, तिम्रै रहने छु' राममायाको निडर आँखा जब शंकरको बेइमानी आँखासँग जुध्यो त एकपटक त उसको हृदयको धडकन नै बन्द भएको जस्तो लाग्यो ।
तर शंकर त घाटघाटको पानी पिएको खेलाडी थियो ? उसले अरूहरूलाई फकाउँदा अपनाएको तरिका प्रयोग गर्यो, 'हेर राममाया, हामी सागपात खादैनौं । यदी मलाई दालभात जस्तै कसैको बाउँसँग उसको छोरी मागेर ल्याउनु नै पर्छ भने एउटी तिमीमात्र होइन थुप्रै छन् । मलाई नयाँपन चाहिएको छ । जबसम्म प्रेमिकाले साहसपूर्वक कुनै कदम चाल्दिन भने उसको दिलबाट डर भाग्दैन र डरको कारण मेरी प्यारी राममाया, साँचो मायाप्रिती बस्न सक्दैन ।'
राममायालाई यस कुरामा केही वास्तविकता रहेकोजस्तो लाग्यो । प्यार त साहसको नै अर्को नाम हो । प्यारमा त सब थोक लुटाउनु पर्छ । केही सोचेर भनिन्, 'त्यसो हो भने तिमीले त्यहाँ लगेर मलाई केही त गर्दैनौं ?'
'ए ! के भनेकी ? कुरा गर्नको लागि त मैले तिमीलाई एकान्तमा जाँउ भनेको । 'केही त गर्दैनौं ?' यो के कुरा भयो । यसो त म पनि बुझ्दछु, जे तिमीले भन्न चाहेकी छ्यौं । तिम्रो इशारा म राम्ररी बुझ्दछु, तिमीले कुनै चिन्ता नलेउ, त्यस कुरामा ।'
राममायाले एक शनिबार बाख्रा चराउन जाने वहाना बनाएर डराउँदै डराउँदै रामजुवाको डाँडो उक्ली । बंकरले पुरा व्यवस्था गरेको थियो । डाँडामाथि एउटा तन्ना ओछ्याएर राममायाको बाटो हेरिरहेको थियो । आइपुगेकी राममायालाई शंकरले सेक्सी चुइङगम दिएर स्वागत गर्यो ।
यता उति कुरो गर्दै ब्लू एल्बम हातमा थमाइदियो । सेक्सी चुइङ्गमको प्रभावले राममायाले नचाहँदा नचाहँदै पनि कामूक फोटोलाई हेर्न थालिन् र उनको आँखामा मादकता छाउन थाल्यो । उनको शरीर काम वासनाले काम्न थाल्यो । उनी मस्तिष्कले सम्पूर्ण शिक्षालाई बाहिर निकालेर उन्मादको ढोका खोलेर एउटा अज्ञात आनन्दको कल्पनामा रम्न थालिन् । शंकरले उनलाई आफ्नो काखमा लियो । उनलाई आफ्नो कौमार्य जोगाउने कुरामा डर थियो । कौमार्य जोगाउने डर नयाँ होइन, धेरै पुरानो हो, प्रत्येक युवतीहरूमा यो डर होस् सम्हालेदेखि नै बसेको हुन्छ । आफ्नो कौमार्य जोगाउन अवोध कन्याहरू प्रायः गरेर धेरैजसो समय आफ्ना आमाबुवाका साथमा रहन चाहन्छन् । उनीहरू नजिक आफूलाई सुरक्षित ठान्दछन् । तर जवान भएपछि यस्तो डर व्यक्तिगत हुन्छ, हुन पनि कौमार्य व्यक्तिले जोगाउने कुरा हो ।
प्रत्येक युवतीहरूमा उसको कौमार्य एकदिन लुटिने छ, यो डर जन्तर घाटीमा झुण्डिए जसरी मनमा बसेको हुन्छ । युवतीहरू पुरुषभन्दा टाढा रहन चाहन्छन् सायद युवा–युवतीहरू नजिक भएमा प्रकृतिको हेराइमा अक्षम्य अपराध ठहरिन सक्छ किनभने प्रकृति सृष्टि चाहन्छ । शंकरले उनको शरीरको एक–एक वस्त्र खोल्दै कोमल अंगहरू चलाउन थाल्यो ।
मनभरी डर बोकेकी राममाया सामु आफू पनि निवस्त्र भयो । सुरुमा झिनो विरोध जनाए पनि पछि त्यो खेलमा पूर्ण रुपले साथ दिन थालिन् । जीवनमा पहिलो पटक आनन्दित खेलको खेलाडी बन्दा कौमार्य लुटियो ।
कौमार्य लुटाएपछि राममाया वास्तविक धरातलमा ओर्लिइन् । शंकरले अर्को दिन उनलाई पाँच सय दियो र भन्यो, 'वीरगञ्ज गएर लेडिज डाक्डरसँग जचाउँनु ।'
ग्लानी र अपमानको रापले राममायाको कन्ंिसरीको रौं समेत तात्यो । चतुर चलाख शंकरले कुरा बुिझहाल्यो । सम्झाउँदै भन्यो, 'अनुभवको कमी छ राममाया तिमीमा, यसैकारण तिमी रिसाएकी हौं । मैले संसार देखेको छु, व्यवहारिक मानिस हुँ । विवाह त हामी गर्ने नै छौं, म त यति मात्र चाहन्छु विवाह भन्दा पहिले बच्चा नहोस् ।'
राममाया गइन् । समयमा हुनुपर्ने मासिक धर्म नभएपछि आफूमा गर्भ रहेको थाहा पाइन् । उनले शंकरलाई भनिन्, 'हेर, म आफ्नो मायाको उपहार एभर्सन चाहन्न । तिमी छिट्टै मसँग विवाह गर ।'
शंकर हडबडायो । केही दिन त बहाना बनाएर टार्यो । केही सिप नलाग्ने देखेपछि त्यस ठाउँबाट टाप ठोक्यो । चार महिनापछि एकदिन रामामायाकी आमाले थाहा पाइन् र फकाएर, धम्काएर कुरो ओकलाई छाडिन् । त्यसपछिको दुई महिनामा पनि जतिसुकै प्रयत्न गर्दा पनि शंकरको बारेमा केही अत्तोपत्तो नलागेपछि छोरीको गर्भ दिनप्रतिदिन बढ्दै गरेको कारण उनमा डरको मात्रा बढ्दै गयो ।
यतिञ्जेल लुकाएर राख्नुको आफ्नो विवशता रुदै उनले पतिलाई भनिन् । राममायाको बुवा शत्नवीर स्वभावले अती शुशील थिए । अभाव र निर्दयी बावुको कठोर नियन्त्रणमा हुर्किएका उनको बाल्यकाल डाँको छाडेर रोएर होइन भित्र–भित्रै आँशु पिएर आफ्नो जीवनको दुःख बाल्यकालदेखि नै सहने बाटो पहिल्याएका थिए । राममायालाई उनले तत्काल केही भनेनन् । केही दिनपछि एक बिहान शन्तवीरले यतिमात्र भने, ?हेर छोरी, एउटा इज्जत थियो अरु केही थिएन तेरो गरीब बावुसँग । यो गाउँका मानिसले अब तेरो बावुलाई शब्द प्रहार गरेर जिउँदै मारिदिनेछन्... तैले यो कुरा सोचिनस् । तेरो बुवासँग पैसा भएको भए, तेरो यस अवस्थामा पनि तलाईं साथ दिने थियो' यति भनेर उनको चित्त बुझेन । जुन वातावरणमा उ रहन्थ्यो, त्यहाँ घर–घरमै रक्सी बेच्नु र मौका परे देहव्यापार गर्नु सामान्य कुरा थियो । राममायाको जस्तो अवस्थाका केटीले त बाध्यतावश देह व्यापार अपनाउ नै पथ्र्यो । दुःख गरेर भए पनि त्यो वातावरणबाट छोरीलाई बचाएको थियो । अब त बाबुकै अगाडि रामामायाबाट देह व्यापार हुने कुराले उनको मुटु हल्लिनु स्वभाविकै हो । इज्जत लुटाएकी छोरीप्रति गरिनु पर्ने आक्रोश शन्तवीरमा थिएन । धेरै सोचेर उनले यतिमात्र भन्न सक्यो, 'यो भन्दा राम्रो त डुबेर मर्थिस् छोरी । तेरो कारणले हाम्रो कालो भएको मुहार गाउँलेहरूलाई देखाउँन पर्दैनथ्यो ।'
राममायाले स्वयं कुनै निकास पाउन सकेकी थिइन, शंकरले धोखा दिएपछि । बावुको यो शब्दले सोझो बाटो देखायो, वागमतीमा जलसमाधि लिने । उनले निश्चय गरिन् आज बाख्रा चराउन जाँदा फर्केर घर आउन्न । बाख्रा लिएर पहिले त उनी सरासर रमचुहा डाँडा उक्लिन् जहाँ उनको प्यारो अक्षत योनी क्षत भएको थियो ।
त्यसपछि तीन पटक पाइला बजारीकन आफ्नो घृणा व्यक्त गर्न थुक्क थुकेर हिडिन् डाँडैडाँडा । भीमबाँधदेखि वर एउटा गहिरो रह बागमतीमा बनेको छ । सोही रहको भीरमा चढेर धेरैबेर टोलाइरहिन र अन्तमा झ्वाम्म हामफालेर जलसमाधि लिइन् ।